कांग्रेस अछाममा आएको उत्साह र सभापति भरत कुमार स्वाँरको योगदान - Hamro Bulletin
बुधबार २२, मङि्सर २०७८ १९:१४
कांग्रेस अछाममा आएको उत्साह र सभापति भरत कुमार स्वाँरको योगदान
हाम्रो बुलेटिन बिहिबार, ०२ मङि्सर २०७८
नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले देशभर माहोेल तातेको छ । यो महाधिवेशन नजिकिएसंगै अछाममा पनि चुनावि सरगर्मी बढेको छ।
अहिले धमाधम वडा र पालिकास्तरीय बैठक भइरहेका छन् । पार्टी कार्यालयदेखि चिया पसलमा पनि महाधिवेशनकै चर्चा छ । सर्वसाधारणदेखि कांग्रेस कार्यकर्तालाई पनि अहिले महाधिवेशन लागेको छ । अरु बेला सुनसान हुने नेताहरूका घरमा अहिले भीड बढेको छ । चोक चोकदेखि होटलसम्म जितहारको हिसाब भइरहेका छन ।
प्रत्यक्ष भेटघाटदेखि टेलिफेन, फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालबाट मतदातासँग जोडिने क्रम बढेको छ । नेताहरुले विचार प्रवाह अगाडि बढाउन सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेका छन् ।
कांग्रेसका ऊर्जाशीलदेखि अल्छि नेतासमेत अहिले एकाएक सक्रिय भएका छन्। क्रियाशील सदस्यदेखि वडा निर्वाचनमा खासै विवाद थिएन । पालिका अधिवेशनसम्म आइपुग्दा भने केहि विवाद सुरु भयो ।
केही ठाउँमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भयो। केही ठाउँमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भयो । अब प्रदेश, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सहज नहुने कुराको अनुमान कार्यकर्ताले लगाइसकेका छन्। अछाममा प्रदेश, क्षेत्र र जिल्लासम्म नेतृत्व हत्याउन तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यसले अछामी जनतामा कांग्रेसप्रतिको आकर्षण अझै कायम रहेको देखाउँछ ।
कांग्रेसलाई जीवन्त पार्ने यो ‘महायज्ञ’ जित–हारभन्दा माथि रहेको कार्यकर्ता बताउँछन् । कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो रहेको चुनावी प्रतिस्पर्धाले देखाएको छ । कांग्रेसको यो अभ्यास अन्य दलका लागि पनि सिक्ने विश्वविद्यालय भएको छ ।
कांग्रेसक अछामको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अरु पार्टीका राजनीतिक खेलाडीले पनि चासो साथ हेरेका छन् । दलगत राजनीतिमा बिरलै देखिने आन्तरिक लोकतन्त्रको यो अभ्यासको प्रशंसा भइरहेको छ । समग्रमा कांग्रेस महाधिवेशनले अन्य दललाई आन्तरिक लोकतन्त्रको उदाहरण दिएको छ।
मलाई देशविदेशका मित्रहरूले कांग्रेस अछामको भावी नेतृत्वबारे जिज्ञासु भएर प्रश्न गर्छन् । भावी नेतृत्वलाई लिएर अछामका कांग्रेसबीच अहिले जस्तो चासो विगतमा कहिल्यै देखेको थिइनँ ।
कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा म आफैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्न भएको छु । अहिले नेतृत्वका लागि पार्टी बाहिरबाट भइरहेका अड्कलबाजी विगतका महाधिवेशनमा फिटिक्कै देखिएको थिएन । अर्थात्, कांग्रेस अछामको भावी नेतृत्व चयन कांग्रेसजनको मात्रै विषय रहेन । यो आम अछामबासी र अन्य जिल्लाको पनि चासोसँग जोडिएको छ । जिल्लाभित्रका संचार क्षेत्रले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई पनि कम महत्व दिएको म देख्दिनँ ।
अछाममा कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ? यसको नेतृत्व कस्ताले लिनुपर्छ? भन्ने कुरा अब आदर्शवादी गफ मात्रै भयो । अब अछाममा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा गुट–उपगुटको समीकरण कसरी अगाडि बढदैछ ? र, त्यसबाट चार वर्षका लागि नेतृत्वमा को पुग्ला? चासो यतिमा मात्रै सीमित छैन।हाम्रो बुलेटिनले सभापति स्वाँरको कार्यकालका उपलब्धिहरु खोतल्ने कोशिस गरेको छ ।
सभापति स्वाँरका ५ वर्ष
२०७२ फागुनमा सम्पन्न कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी गणेश बहादुर बिष्टलाई हराउँदै सभापति निर्वाचित भएका स्वाँरले आफ्नोे ५ वर्षे कार्यकालमा कांगे्रस अछामलाई अग्रगमनको नवीन दिशामा लगेको कुरा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
पार्टी कार्यालय निर्माण
सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै स्वाँरका लागि प्रमुख चुनौती थियो, पार्टी कार्यालयको भवन निर्माण । नेपाली कांग्रेस जस्तो देशकै पुरानो पार्टीको जिल्लामा कार्यालय भवन नहुनु यसअघिको नेतृत्वको प्रमुख असफलता थियो ।
त्यसमा पार्टी नेतृत्व सम्हालेका वर्तमान सभापति स्वाँरका लागि पार्टी कार्यालय बनाउने काम कम्ता चुनौतीपूर्ण थिएन । बाह्यसँगै पार्टीभित्रका अनेक बाधा अड्चनबीच स्वाँरले आफ्नै कार्यकालमा पार्टी कार्यालयको तीन तले भवन निर्माण गर्न सफल भए । सभापति स्वाँरको कार्यकालको यो ठूलो सफलता थियो ।
स्थानिय निर्वाचनमा विजयी
पूर्व गृह तथा उपप्रधानमन्त्री भीम रावलको गृह जिल्लालाई एमालेले लाल किल्ला बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेन । त्यो अवस्थामा पनि पार्टीका लागि बलियो खम्बाझैं उभिएर निर्विवाद चुनावको टिकट बाँड्नेदेखि जिल्लामै कांग्रेसलाई बहुमत दिलाई जिल्ला समन्वय समिति आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउनु सभापति स्वाँरको कार्यकालको अर्को ठूलो सफलता थियो ।
प्रदेश र संघस्य चुनावमा पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नमिलेको भए अछामका दुवै क्षेत्रमा कांग्रेसले जित हासिल गर्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
पार्टीको आन्तरिक कोष
पार्टीको आन्तरिक कोष पनि सभापति स्वाँको कार्यकालमा आश गरेभन्दा बढी मजबुत भएको नेपाली कांग्रेस अछामका नेता कार्यकताहरु बताउँछन । सभापति स्वाँरको नेतृत्व सफल हुनुको उदाहरण पार्टीको आन्तरिक कोष मजबुत बनाउनु पनि हो ।
जागरण अभियान र सशक्त सहभागिता
जिल्लामा सभापति भएपछि केन्दमा बस्ने अछामका नेताहरुको प्रचलन स्वाँरले आफ्नो कार्यकालमा अन्त्य गरेका छन् । कांग्रेसको जागरण अभियान वा पार्टीका सबै कार्यक्रममा सभापति स्वाँरले अछामका भुलु रहफदेखि सिउँडी सोकट, रामारोशन, ऋषिदह, खप्तडसम्म पुगेको मैले नै देखेको छु । पार्टी नेतृत्वको यो किसिमको सक्रियता बिरलै देख्न पाइन्छ ।
सभापति स्वाँरले कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुलाई जिल्लामा बोलाई पटक पटक प्रशिक्षण गराए । जीवन परियार र धनराज गरुङ लगातका नेताहरु प्रशिक्षण दिन आए ।
आफ्नो कार्यकालमा सभापति स्वाँरले संगठन सुदृढीकरणका लागि पटक पटक केन्द्रीय तहका नेतालाई बोलाएर प्रशिक्षण चलाएका उदाहरण छन् । उनको यो कार्य पनि सफल नेतृत्वको उदाहरण हो ।
गत वर्ष रामारोशन गाउँपालिकामो विनाशकारी बाढी आएर बजारका २५ घर बगाउँदा १७ जनाको ज्यान गयो । त्यो समयमा गाडी परै जाओस् हिँड्ने बाटोसमेत थिएन । तर सभापति स्वाँर पैदलै पीडितको घरदैलो पुगेर उनीहरुको घाउमा मलहम पट्टी लगाउने काम गरे । त्यहाँबाट फर्केर पार्टीमार्फत सहयोग अपिल गर्दै पुनः पीडित क्षेत्रमा २८ लाख बराबरको राहत बाँडे ।
कोभिड महामारीमा पनि विभिन्न दातृ निकायहरुलाई सहयोग अपिल गरे । बयालपाटा लगायत जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गरेको कुरा पनि आममानिसको स्मरणमा ताजै छ । बयालपाटा अस्पतालले आर्थिक अभाव देखाउँदै कर्मचारी कटौती गर्दा अस्पताललाई आर्थिक जुटाउने तर कर्मचारी पुनर्वहाली गर्ने शर्तमा उनले अग्रणी भूमिका खेलेका थिए ।
सदस्यता निर्विवाद दर्ता, नवीकरण
देशका प्रायजसो जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद भइरहँदा सभापति स्वाँरले अछाममा भने निर्विवाद दर्ता र नवीकरण गराएर सफल नेतृत्वको गतिलो उदाहरण पेश गरे । त्यति मात्रै नभएर वडा तहको अधिवेशन सर्वसम्मत सम्पन्न गराउन सफल भए । २ पालिकाबाहेक ८ वटामा सर्वसम्मत अधिवेशन गर्न सफल भएर अरुका लागि उदाहरण देखाइदिए ।
तिब्र ईच्छाशक्तिका बाबजुद पनि समय अभावका कारण संगठनको हितमा गर्नुपर्ने केहि कामहरु अपुरा रहेकाले यदि सबै कार्यकर्ता साथ दिएमा फेरी एक कार्यकाल सभापतिमै दोहोरीने सभापति स्वाँरको भनाई छ ।